Ra’isul Wasaare Rooble oo war kasoo saaray doorashadii ka dhacday Afisiyooni – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa si deg deg ah ugu hambalyeey xubnaha Guddoonka Guddiga doorashada Somaliland SEIT ee Garabka Mahdi Guuleed oo maanta is doortay.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay uu sii wadi doono waan waantii uu ka dhex waday siyaasiyiinta Somaliland ee ay kala hogaamiyaan Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Cabdi Xaashi iyo Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed.
Maxamed Xuseen Rooble ayaa dadaal iyo waqti badan galiyay sidii isfaham uu kala dhex dhigi lahaa garabyada Siyaasadda Somaliland, wallow ay guuldareysteen dadaalo kala duwan oo uu waday Ra’isul Wasaare Rooble.
Guddiga doorashada Somaliland ee Garabka Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa Guddoomiye u doortay inuu noqdo Khadar Xariir Xuseen, halka Guddoomiye ku-xigeen loo doortay Najiib Xuseen Samaale.
Doorashadii ka dhacday Teendhada Afisyooni ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka maqnaa xubnaha afarta ah ee uu soo magacaabay Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, kuwaasi oo aan ka qeyb gelin doorashada.